scheduleसोमवार मंसिर ३० गते, २०७६
एजेन्सी, १८ जेठ । परिवारसँग बस्दा आफूले हारको पीडा भुल्ने गरेको लियोनल मेस्सीले बताएका छन् ।
मेस्सीले श्रीमति र छोराहरुसँग समय बिताउँदा पराजयको पीडा सजिलै भुल्ने बताएका हुन् । त्यस्तै मानिसको जीवनमा फुटबलबाहेक अन्य कुरा समेत महत्वपूर्ण रहेको र बाबु बनेपछि जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फराकिलो भएको मेस्सीको भनाइ छ ।
‘पराजित हुँदा निकै पीडा हुन्छ तर यस्तो पीडालाई फरक तरिकाले सामना गर्छु’, फक्स स्पोर्टससँग कुरा गर्दै मेस्सीले भने, ‘जेठो छोरा थिआगो सन् २०१२ मा जन्मेपछि जीवनमा खेलको नतिजाभन्दा अन्य कुरा समेत महत्वपूर्ण हुने रहेछन् भन्ने थाहा पाएको थिए । ‘
विहे हुनुपूर्व हारको पीडा भुल्न निकै कठिन हुने गरेको समेत मेस्सीले बताए । ‘पहिला-पहिला खेलमा हारेपछि घर आउथेँ, कोठामा एक्लै बस्थेँ, टिभी पनि हेर्दैनथेँ, खाना पनि खान्थिनँ’, उनले भने, ‘तर अहिले सजिलो हुन्छ । घरमा आएपछि छोराहरु र श्रीमतिसँग खेल्छु अनि हारको पीडा भुल्छु ।’
मेस्सीको परिवारमा उनकी श्रीमति एन्टोनेला, छोराहरु थिआगो, म्याटियो र साइरो छन् ।
हतारमा पुर्वाधार निर्माण हुँदा सागमा चुनाैतीको सामना गर्नुपर्‍यो : मन्त्री विश्वकर्मा
पोखराको विजयी सुरुवात, कुशलको अविजित अर्धशतक निर्णायक
वायर्न म्युनिखको प्रभावशाली जित, कोटिन्होले गरे ह्याट्रिक
एट्लेटिको मड्रिड लिगको चौथो स्थानमा उक्लियो
बार्सिलोना बराबरीमै सिमित
लेस्टर सिटीलाई नर्विच सिटीले बराबरीमा रोकेपछि…
चेल्सी फेरि पराजित, लाम्पार्ड उच्च दबाबमा
सलाहको २ गोलमा वाटफोर्ड रोकियो, अपराजित यात्रामा लिभरपुल
ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्रको विजयी सुरुवात
प्रशिक्षक इमरीद्वारा इभर्टन र चाइनिज क्लबको प्रस्ताव अस्वीकार
बार्सिलोनालाई पराजित गर्ने दाउमा रियल सोसिडाड
मौसम खराब हुँदै गएपछि पिपिएल आइतबार उद्घाटन हुने
विजेता खेलाडीलाई बाजागाजासहित नगर परिक्रमा गराइयो
इभान राकिटिकको मुड परिवर्तन
पराजित हुनबाट जोगियो आर्सनल
युरोपा लिगः म्यानचेस्टर युनाइटेडको प्रभावशाली जित
बेल बेन्चमै सिमित
आइतबार जन्मिएका व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ ?
काठमाडौँ, २९ मंसिर । मानिसको आफ्ना आफ्नै स्वभाव हुन्छन् । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार व्यक्ति कुन बार जन्मिएको हो त्यसमा पनि...
निवर्तमान सभामुख महराको बकपत्र सुरु
काठमाडौ, २९ मंसिर । संसद सचिवालयकी कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयासको आरोपमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका निवर्तमान सभामुख...
प्याजले करोडपति बनाइदिएपछि ….
काठमाडौं, २९ मङ्सिर । सरसर्ती पढ्दा कुनै फिल्मको पटकथा जस्तो लाग्ने विषय वास्तविकतामा बदलिएको छ एक किसानका लागि । ती किसानले...
काठमाडौँ, २९ मंसिर । गएराति भएको प्रिमियर लिगमा चेल्सी फेरि चिप्लिएको छ । चेल्सी एएफसी बोर्नेमाउथसँग १-० गोलले पराजित भएको...
१४ मृतक मध्ये १२ जनाको सनाखत (अपडेट)
सिन्धुपाल्चोक, २९ मंसिर । दोलखाको कालिञ्चोक तिर्थ यात्रा गएर फर्केको बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका १४ मध्ये हालसम्म १२ यात्रुहरुको...
काठमाडौँ, २९ मंसिर । स्पेनिस लिगमा एट्लेटिको मड्रिडले ओसासुनालाई २-० गोलले पराजित गरेको छ । एट्लेटिकोलाई जित दिलाउन अल्भारो...
भारत महिलाविहिन हुनसक्ने नायिका सिन्हाको चेतावनी
मुम्बई, २९ मंसिर । बलिउड नायिका सोनाक्षी सिन्हाले भारतमा कुनै पनि महिला सुरक्षित नभएकव टिप्पणी गरेकी छिन् । उनले यौन हिंसाका...
सिन्धुपाल्चोक बस दुर्घटनाः १२ जनाको मृत्यु, १८ जना घाइते (अपडेट)
काठमाडौँ, २९ मंसिर । सिन्धुपाल्चोकको ६ किलो मोडमा भएको बस दुर्घटनामा परी १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना घाइते भएका छन् । बिहान...